काठमाडौं। सुख सुविधाको खोजी गर्नेक्रममा मानव चेतनाले विभिन्न प्रविधिको विकास गरेको छ। प्रविधिको विकाशसँगै मानिसलाई सुख सुविधा उपलब्ध भएका छन्। मानिसलाई कठिन शारीरिक कष्ट गर्नुपर्ने अवस्था अहिलेको युगमा छैन। प्रविधिले मानव जीवन समुदायलाई सहजता प्रदान गरेको छ। यसरी मानव जीवन सञ्चालन गर्न सहज बनाउने मध्ये सवारी साधन पहिलो प्रविधि हो।
गाडी मान्छेको दैनिकी बनेको छ। हिजो विलासिताका रूपमा लिइने गाडी आज आधारभूत आवश्यकता भएको छ। गाडी प्रयोग गर्न वा किन्न पुँजीपति हुन जरुरी छैन। सामान्य मध्यम वर्गीय व्यक्तिले पनि आवश्यकता पूरा गर्न किन्न सक्छ। आफ्नो आवश्यकता अनुसारको गाडी हरेक व्यक्तिले बजारबाट सजिलै किन्न सक्छ। यसरी हरेको व्यक्तिको पहुँचमा गाडी पुगेपछि सडकमा सवारी साधनको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएको छ।
अहिलेको समयमा गाडी मोह नहुने विरलै मान्छे हुन्छन्। अहिलेको व्यस्त र प्रतिस्पर्धात्मक समाजमा गाडी अपरिहार्य भइसकेको छ। गाडी समयको माग बनेको छ। मनोरञ्जन र विलासिताको वस्तु मात्रै होइन, आवश्यकता बनेको छ। सानो छँदा बाँसको, कुनै बट्टाको बिर्को, पाइप वा अन्य कुनै तरिकाबाट पांग्रा बनाएर गाडी चलाउने बाल्यकालका खेल तपाई हामी धेरैका संस्मरणका विषयवस्तु हुन्। यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ कि गाडी मोह मानिसको सानैदेखि हुन्छ।
समयक्रम अनुसार आर्थिक आर्जनका कारण कतिले गाडी जोड्न सक्छन्। तर वर्तमान समयसम्म सावरी साधनको इन्धनको स्रोत भनेको पेट्रोल पम्प हो। सवारी साधनमा इन्धन राख्न चालकले दैनिक केही समय पेट्रोल पम्पमा बिताउनु पर्ने हुन्छ। इन्धनको लागि पेट्रोल पम्पमा जाँदा हामीले केही सावधानी अपनाउन जरुरी छ। हाम्रो सानो लापरबाहीले पनि पेट्रोल पम्पमा ठूलो घटना निम्त्याउन सक्छ। सानो गल्तीले पेट्रोल पम्पमा ठूल ठूला घटना भएका समाचार हामीले सुन्ने र पढ्ने गरेका पनि छौं। त्यस कारण सावधानी अपनाउन जरुरी छ। जसबारेमा हामीले यहाँ केही टिप्स उल्लेख गर्ने प्रयास गरेका छौं।
१. पम्प मिटरमा जिरो
पेट्रोल पम्पमा तिरेको मूल्य अनुसार तेलको परिमाण नपाइन पनि सक्छ। पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल वा डिजेल भर्नेक्रममा ठगी पनि हुन सक्छ। र बारम्बार यस्ता गुनासाहरू पनि आउने गर्छन्। पेट्रोल भर्दा धेरै मानिस ठगीको शिकारमा पर्ने गर्छन् पनि। कतिपय अवस्थामा हाम्रो असावधानीका कारण ठगिन पनि पुग्छौं। यस्तो ठगीबाट बच्न हामी मिटरमा ध्यान दिन पर्छ। परिमाण र मूल्यतर्फ पेट्रोल लाउनुअघि मिटरमा जिरो हुनै पर्ने कुरामा पनि विशेष ध्यान दिनुहोस्। जुन पेट्रोल पम्पमा पहिला नै तपाईँले माग गरे अनुसारको पेट्रोल परिमाण र रकम समेत सेट गरेर पेट्रोल भरिन्छ, त्यहाँबाट ठगी हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ।
२. मोबाइल प्रयोग नगर्नुहोला
पेट्रोल पम्पमा वा ग्यास रिफिल प्वाइन्टमा हामी सबैले एउटा नोटिस बोर्ड झुण्डिएको पाउँछौं, ‘कृपया मोबाइल फोन प्रयोग नगरिदिनु होला।’ तर, पम्पमा पेट्रोल भर्न जाँदा आम उपभोक्ताले मोबाइल चलाइरहेका हुन्छन्, पम्पमा मोबाइल चलाउन हुँदैन। तेल भर्ने बेलामा ‘रे भाइपर’ आइरहेको हुन्छ। त्यहाँ मोबाइल चलाउँदा दुर्घटना हुन सक्छ। पेट्रोल पम्पमा गएर मोबाइल चलाउने गल्ती गर्नु हामीले गर्नु हुँदैन।
३. पेट्रोल पम्पमा धूम्रपान नगरौं
पेट्रोल पम्पमा एउटा अर्को पनि निषेधाज्ञा पाउँछौं हामी यी स्थानहरूमा, ‘धूम्रपान मनाही छ।’ तर, तेल भर्न गएका बेला लाइन बस्ने क्रममा कतिपय सर्वसाधारणहरूले चुरोट खाने गर्छन्। त्यसरी पम्पको वरपर कुनै पनि किसिमको आगोजन्य क्रियाकलाप गर्न हुँदैन। यस्तो लापरबाहीले पेट्रोल पम्पमा आगलागी हुन सक्छ। पम्पमा आगलागी भएका घटनाहरू हामी दैनिक अखबारमा पढिरहेका हुन्छौं। पेट्रोलियम पदार्थ भर्न जाने सर्वसाधारण, पेट्रोल पम्प र डिपोले सुरक्षा अपनाउने हो भने दुर्घटनाको सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ।
४. सवारी साधन बन्द गर्नुहोस्
तेल हाल्दा सावरी साधन सधैँ बन्द राख्नु पर्छ। पेट्रोल भर्ने क्रममा तपाईंको सवारी साधन बन्द नभए त्यहाँ आगलागीको सम्भावित जोखिम धेरै हुन सक्छ। पेट्रोल भर्न क्रममा गाडी गुड्यो भने अवस्था भयाभव हुन सक्छ। पेट्रोल भर्दा कारको ढोका खोलेर भित्रबाहिर नगर्नुहोस्। विशेष गरी पुराना गाडीहरूबाट जोखिम बढी हुन सक्छ। सामान्य सावधानीले ठुलो दुर्घटना हुनबाट जोगाउन सक्छ। त्यस कारण सावधानी अपनाउन जरुरी छ।
५. मास्कको प्रयोग गरौं
कुनै कुनै समयमा आफ्नो सवारी साधनमा इन्धन राख्न पेट्रोल पम्पमा घण्टौं कुर्नु पर्ने अवस्था आउँछ। पेट्रोल पम्पमा बेजीन नामक हाइड्रो कार्वन फैलिरहेको हुन्छ। यो एक प्रज्वलनशील तत्त्व हो। बेजीन नामक हाइड्रोकार्वन ग्यास फोक्सोका लागि एकदमै हानिकारक हुने विज्ञहरू बताउँछन्। हाइड्रोकार्वन एक सीमाभन्दा धेरै फोक्सोमा पुगेको खण्डमा यसले क्यान्सर हुने सम्भावना एकदमै धेरै रहन्छ। सामान्य अवस्थामा पनि यसले धड्कन बढ्ने, बेहोशी हुने तथा टाउको दुख्ने हुन्छ। सकेसम्म पेट्रोल भर्दा मोटरसाइकलबाट तल झरेर भर्नु पर्छ ताकी पेट्रोल भर्दा निस्कने वाफ सिधा श्वास मार्फत फोक्सोमा जान पाउँदैन। मास्कको प्रयोगले पनि केही हदसम्म बेजीनलाई श्वास मार्फत भित्र जान रोक्छ। त्यसैले पेट्रोल पम्पमा इन्धन भर्न जाँदा अत्यधिक सतर्कता अपनाउनु पर्छ। पेट्रोल पम्पमा जाँदा मास्कको प्रयोग गर्नुहोस्। कतिपय पेट्रोल पम्पमा यसको प्रयोग गरेको पाइँदैन। यसले लगातार पेट्रोल पम्पमा काम गर्ने मजदुर तथा ग्राहकको स्वास्थ्यलाई धेरै हानि पुर्‍याएको हुन्छ।
६. नियमित साबुन पानीले हात धोऔं
धेरै जसो संक्रमण हाम्रो हात मार्फत हुने गर्छ। एक व्यक्तिबाट अर्कोमा भाइरस सर्ने प्रमुख माध्यम पनि हात हो। त्यस कारण नियमित साबुन पानीको प्रयोग गरेर हात धुने बानी बसालौं। त्यसमाथि पेट्रोल पम्पमा संक्रमणको जोखिम कति हुन्छ भन्ने विषय ५ नम्बर बुदामा उल्लेख गरिसकेका छौं। पेट्रोल पम्पमा केही बस्तु छुन परे सम्भवतः पञ्चा लगाएर मात्र छुने गरौं। तर हरेक बेला यो सम्भव नहुन पनि सक्छ। त्यसैले पेट्रोल पम्पबाट निस्किने बित्तिकै पनि साबुन पानीले वा सेनिटाइजरले राम्रोसँग हात धुने गर्नुहोस्।